Abdulkadri Warsame 0
Abdulkadri Warsame 0 Comments
CABASHO FURAN Colaadaha iyo khilaafaayada siyaasadeed waxaa lagu waayay naf iyo maal, si la mid ahna waxaa ka dhashay burbur, barakac baaxad weyn leh, iyo dilal loo geystay shacabka si aan kala sooc laheyn. Dhacdadii 24/12/2002 ee xasuuqii ardayda waxay daba joogtay xadgudubyo xad dhaaf ah oo loo geysanayey had iyo jeer bulshada Soomaaliyeed. Haddaba, Anigoo ah saxiixaha cabashadan kana soo horjeeda xasuuqa, dilka, afduubka, kufsiga, iyo xadgudubka ardayda,haweenka,adeegayaasha bulshada iyo dadka rayidka ah. Waxaan codsanayaa : 1.. In cid kasta ee geysata xadgudub ka dhan ah caruurta, ardayda iyo dadka rayidka ahba la horkeeno caddaaladda. 2.. In bulshada caalamku u sameyso maxkamad caalami ah oo baarta, xukuntana dambiilayaalka dagaal ee ku xadgudbaya dadka rayidka ah, sida ku cad xeerarka caalamiga ah. Waxaan caddaynayaa: 1. In cid kasta oo sheeganeysa maamulka goobta uu xadgudub ka dhaco ay mas
Waxaa soo abaabulay bulshada rayidka ah iyo dalladaha waxbarashada oo ku cabiraya ka soo horjeedka gardarrada lagu hayo shacab weynaha soomaaliyeed